निन्द्रा लाग्दैन के गर्ने होला सोल्टिहरु भनि दिनू पर्यो -
निन्द्रा लाग्दैन के गर्ने होला सोल्टिहरु भनि दिनू पर्यो
२०७८ जेष्ठ २७ गते प्रकाशितetoday
राम्ररी निन्द्रा नलागेकै कारण ‘स्लिपिङ ट्याब्लेट’ चपाउनुपर्ने वाध्यता पनि धेरैलाई छ । राती राम्ररी निन्द्रा नलाग्नु एउटा साझा समस्या बनिरहेको छ ।
जब तपाई मस्त निदाउन सक्नुहुन्न, शरीर बोझिलो हुन्छ । दिमागले सहि ढंगले काम गर्न सक्दैन । त्यतीमात्र होइन, यसले शरीरमा रोगसमेत निम्त्याउँछ । अनिन्द्राकै कारण उच्च रक्तचाप बढ्छ, मधुमेहको खतरा हुन्छ । स्वस्थ्य जीवनका लागि गहिरो निन्द्रा अपरिहार्य छ । एक वयस्क व्यत्तिले दिनमा ७ वा ८ घण्टा सुत्नुपर्छ ।
तर, कति समय सुत्ने भन्ने भन्ने कुराले त्यसबेला मात्र अर्थ राख्छ, जब त्यो सुताई आरमदायक र गहिरो हुन्छ । गहिरो निन्द्राले मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थ्यमा राम्रो प्रभाव पार्छ ।
यसरी गहिरो निन्द्रा सुतेपछि दिनभर शरीर चंगा हुन्छ । स्फूर्ति बढ्छ । काम गर्न जाँगर चल्छ । किन निन्द्रा लाग्दैन ? निन्द्रासँग जोडिएको केहि समस्या हुन्छ, त्यसमा सबैभन्दा
बढी दुई प्रकृतिको देखिन्छ । एक त, कम निन्द्रा लाग्नु । अर्को चाहि मस्त निदाउन नसक्नु । निन्द्रा नलाग्नुको खास कारण मानसिक तनाव नै हो । जब तपाईको मन स्थिर
हुँदैन, शान्त हुँदैन निन्द्रा खलबलिन्छ । अधिक मानसिक थकानमा पनि निन्द्रा लाग्दैन । त्यस्तै कतिपय रोग, शारीरिक पीडा, दुखाई आदिले निन्द्रा लाग्दैन ।
त्यस्तै सुत्नुअघि गरिने कतिपय गतिविधिले निन्द्रा विथोलिन्छ । गलत खानपान, अपच पनि अनिन्द्राको कारण हो । त्यस्तै त्यहाँको वातावरण, ओछ्यानले समेत सुत्ने कुरामा प्रत्यक्ष असर गर्छ ।
कसरी पाउने गहिरो निन्द्रा ? १. गहिरो निन्द्रा पाउनका लागि मूख्यतः मानसिक रुपमा स्वस्थ्य हुनु आवश्यक छ । सुत्नुअघि मनमा कुरा खेलाउने, चिन्ता लिने जस्ता काम गर्नु हुँदैन ।
२. सुतेको बेला आयव्यायको हिसाब लगाउने, पारिवारिक समस्यामा घोत्लिने, नकारात्मक बिचारहरु ल्याउने जस्ता कुराले पनि निन्द्रा विथोलिन्छ । त्यसैले सुत्नुअघि यस्ता विकारयुक्त विचारहरु मनमा ल्याउन हुँदैन ।
३. सुत्नुअघि त्यस्ता कुराहरु सोच्नु हुँदैन, जसले मनलाई दुखित तुल्याउँछ । अक्सर मानिस ओछ्यानमा पल्टिएर मनमा अनेक कुरा खेलाउन थाल्छन, विगतका गल्तीहरु
सम्झन्छन, भविष्यका बारेमा कल्पन्छन् । यसले पनि निन्द्रा विथोल्छ । यस्ता कुराहरु सोचेर केहि फाइदा छैन । दिनमा शरीर सक्रिय भएको बेला यस्तो काम गर्नुपर्छ, जसले आफुलाई सन्तुष्ट तुल्याउँछ ।
५. सुत्नुअघि धेरै खानेकुरा खानु ठीक होइन । यसले पेट भद्दा हुन्छ र राम्ररी निन्द्रा लाग्दैन । अधिक पानी वा झोलयुक्त पदार्थ सेवन गर्दा पनि पिसाब लाग्छ, जसले निन्द्रा विथोलिदिन्छ ।
सुत्नुअघि हल्का एवं सुपाच्य खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ । ६. सुत्ने र उठ्ने समय तालिका नियमित हुनुपर्छ । निश्चित समय तालिकामा सुत्ने अभ्यास गरिएको छ भने त्यही समयमा निन्द्रा लाग्छ ।
७. शारीरिक रुपमा निस्क्रिय हुँदा पनि राम्ररी निन्द्रा लाग्दैन । त्यसैले दिनमा शारीरिक रुपमा सक्रिय रहनुपर्छ । त्यस्तै व्यायाम गर्नुपर्छ, हिँडडुल गर्नुपर्छ, सानोतिनो घरायसी काम गर्नुपर्छ ।
८. सुत्नुअघि हल्का खानेकुरा सेवन गर्ने, केहि क्षण हिँडडुल गर्ने, हल्का व्यायाम गर्ने, प्रणायाम गर्ने, ध्यान गर्ने जस्ता सिलसिलाबद्ध क्रियाले पनि गहिरो निन्द्रा लाग्छ ।
९. ओछ्यान सजिलो हुनुपर्छ । साथै सुत्ने कोठाको वातावरण प्रतिकुल हुनुहुँदैन । राती चर्को ध्वनी आउने, हल्लीखल्ली हुने जस्ता कुराले पनि निन्द्रा विथोलिन्छ ।
१०. सुत्नुअघि चाखलाग्दो पुस्तक पढ्नुहोस् । मधुरो संगीत सुन्नुहोस् । यसले ध्यान अन्यत्र भंग हुँदैन र निन्द्रा लाग्छ । केहि घरेलु विधी
राम्रो निन्द्रा पाउनका
लागि केहि घरेलु औषधिले पनि उपयोगी हुन्छ । तर, पूर्ण रुपमा यसमै निर्भर हुनुहुदैन । स्वस्थ्य दिनचर्यासँगै घरेलु विधी अपनाएपछि गहिरो निन्द्रा पाउन सकिन्छ ।
काचो प्याजको सेवन गर्नुपर्छ । पुदिनाको पात पानीमा उमालेर उक्त पानी सेवन गर्नुपर्छ । सुत्नुअघि मनतातो दुध पिउनुपर्छ । योगात्मक विधियसलाई नियमित रुपले अभ्यास गर्दै गयो भने केहि सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुन सक्छ ।
१. बिस्तारै बिस्तारै चार सेकेन्डसम्म नाकले सास लिने । २. ७ सेकेन्डसम्म सास रोकेर राख्ने । ३. आठ सेकेन्डसम्म विस्तारै विस्तारै मुखले सास छाड्ने ।
यसले कसरी काम गर्छ ? जब हामी तनावग्रस्त हुन्छौ, चिन्तित हुन्छौं, तब हाम्रो शरीरमा रगतमा एड्रेनालाइन नामक हर्मोनको मात्रा बढ्छ । यसले सास तेज र हल्का हुन्छ ।
जब हामी बिस्तारै बिस्तारै सास लिन्छौं । त्यसले मुटुको धड्कन सामान्य अवस्थामा फर्काउँछ । र, केहि मिनेटमा हामी शान्त हुन्छौ । यो सामान्य मनोविज्ञान हो ।
यो व्यायामले मस्तिष्कलाई पनि शान्त बनाउँछ । किनभने हाम्रो पुरा ध्यान सास नियन्त्रण गर्नेमा केन्द्रित हुन्छ । त्यस समय हाम्रो नर्भस सिस्टम आफ्नो एक्टिभिटी कम गर्छ ।
यसले तनाव गायब हुन्छ र आनन्दित महसुष हुन्छ । यसले कसरी सहयोग गर्छ ? यदि रातको समयमा कुनै कारणले निन्द्रा विथोलियो भने र फेरी निदाउन समस्या भयो भने ब्रीदिंग व्यायाम गर्नुपर्छ । कुनै प्रतिस्पर्धा, परीक्षा वा अन्र्तवार्तामा जानुअघि हतास भइयो भने पनि यस किसिमको विधी अपनाउन सकिन्छ ।
विहानै देखिएका यस्ता ५ चिजले दिनेछ राम्रो संकेत, सेयर गर्नुहोस हरेक पल शुभ बि’त्नेछ ..
तोरीको तेल र बेसार प्रयोग गरेर यसरी चम्काउनुहोस् दाँत !